पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी – Sandesh Press
June 11, 2021 471
काठमाडौँ । भन्ने गरिन्छ, कुनै पतिव्रता पत्नीको यति ताकत हुने गर्दछ जसले पतिको बिग्रिएको किस्मतलाई पनि चम्काउन सक्छन्। यदी कुनै व्यक्तिको कुण्डलीको ग्रह दोषका कारण समस्या भइरहेको छ भने ज्योतिषका केही उपाय अप्नाउनु पर्दछ।
पतिसँगै पत्नीले पनि यी उपाय अप्नाउँदा उनको पतिको भाग्य चम्किने गर्दछ। आज हामी केही यस्ता उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, यदी पत्नीले यी काम गरे पतिको भाग्य चम्किने गर्दछ।
आउनुहोस् जानौँ ती उपाय:
पहिलो उपायः यदी तपाई हरेक दिन बिहान चाडै उठेर स्नान गरी तुलसीलाई जल चढाउनुहोस्। त्यसपछि गुलाबको फूलमा सुन्दुर, चामल लगाएर तुलसीमा अर्पण गर्नुहोस्।
तपाईले यसो गर्नुभयो भने तपाईका पतिका हरेक समस्या हट्ने गर्दछन्। यदी तपाई आफ्नो पतिको हरेक दुख हटाउन चाहनुहुन्छ भने पूजाका समयमा पतिको दुख हटाउने प्रार्थना गर्नुहोस्।
दोस्रो उपायः सुकेको नरिवलको आधा भागमा चिनी भरेर कुनै पिपलको बोडको मुनी राखिदिनुहोस्। यसो गर्दा शनि ग्रहका कारण हुने समस्या हट्ने गर्दछन्।
तेस्रो उपायः हरेक दिन शिव भगवान् सँगै माता पार्वतीको पुजा गर्नुहोस् र माता पार्वतीलाई सिन्दूर चढाउनुहोस्। यसो गर्दा तपाईलाई सौभाग्य प्राप्त हुने गर्दछ।
चौथो उपायः समय समयमा कुनै तेस्रो लिंगी व्यक्तिलाई धन दान गर्नुहोस्। किनकी तेस्रो लिंगीको आर्शिवादले सबै समस्या हट्ने गर्दछन्।
काठमाडौँ । कसको चाहाना हुँदैन श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँचौ। तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठेस लाग्छ, कसैको भने पुरा हुन्छ। कोहि महिला आफ्नो श्रीमानको इच्छा चाहनाको ख्यालै नगर्ने स्वार्थी हुन्छन् भने कोहि महिला आफ्नो श्रीमानलाई सुखी र खुशी राख्न कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन्।
ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार कसैले सुखी र खुशी खोजेर मात्रै पाउने होइन त्यो त आफ्नो ग्रह दशा र राशिअनुसार जुर्नु पर्छ। यहाँ हामी त्यस्ता राशि भएका युवतीका बारेमा कुरा गर्न गैरहेका छौं जसले श्रीमानलाई हर समय हर सम्भब खुशी राख्न चाहन्छ।
यी राशि भएका व्यक्तिले आफ्नो पतिलाई जति दुख परेपनि साथ छोड्दैनन्। यी राशी भएका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन।
आफ्नो पतिलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि साम, दाम,दण्ड, भेदको समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन्। यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरलाई स्वर्ग बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गरिरहन्छन्।
यो राशी भएका महिलाहरु अफ्ठ्यारो परिस्थतिमा रुष्ट रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने क्षमताका हुन्छन्। यस राशिका महिलाहरु आफ्नो पतिलाई सजिलैसँग आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गर्छन्।
पतिको कुरा सुन्दै परिवारमा राज गर्ने यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कुरा राख्न अलिकति पनि डराउदैनन् । परिवारको हरेक कार्यमा आफै हावी हुने आदत यिनीहरुमा हुन्छ।
यो राशी भएका महिलाहरु जिद्दी हुन्छन्। साथै अरुलाई सहजै मनाउन सक्ने खुबी यिनीहरुमा हुन्छ। घर परिवारमा हुने हरेक कार्यको निर्णयमा आफ्नै प्रभाव जमाउने खालका हुन्छन्।
श्रीमानलाई मनाउन यिनलाई कुनै कठिनाई हुँदैन। कर्कट राशि भएका बुहारीले घरमा राजनै गर्छन्।
यो राशी हुने महिला व्यवहारमा अत्याधिक जिद्दी मानिने र आफ्नो पतिलाई जिद्दीलेनै नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुने गर्छन।
कर्मघरमा हुने हरेक कार्यमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्न खप्पिस हुनाले आफ्नो कर्मघरमै राज नै गर्ने गर्छन्। यस राशिका महिलाहरुसँग हरेक परिस्थितिमा आफ्नै तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने खुबी हुन्छ।
Nextमोडल निशा घिमिरेको नर्भिक अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार सुरु
मेस्सीलाई कोपा गुमाएका नेय्मारले लेखे मर्मस्पर्शी संदेश !! उपाधि जितेकोमा यसरी दिए बधाई !!
कतारमा शून्य लागतमा ‘फ्री भिसा-टिकट सहित् एक कम्पनीले माग्यो नेपाली कामदार, यस्तो छ तलब सुबिधा :